1 Samuel 30 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Samuel Nhoma a Edi Kan 30:1-31
Amalekfo bɛtow hyɛɛ Siklag so hyew hɔ (1-6)
Dawid maa Onyankopɔn hyɛɛ no den (6)
Dawid dii Amalekfo no so nkonim (7-31)
Dawid kɔko gyee ne nkurɔfo a atamfo bɛkyeree wɔn kɔe no (18, 19)
Dawid kyerɛɛ sɛnea wɔnkyɛ nneɛma no (23, 24)
30 Ne nnansa so a Dawid ne ne mmarima no beduu Siklag+ no, na Amalekfo+ abɛtow ahyɛ anaafo famfo* ne Siklag so, na wɔasɛe Siklag de ogya ahyew kurow no. 2 Wɔbae no, na wɔakyere mmea+ no ne nnipa a wɔaka wɔ hɔ nyinaa kɔ, efi akumaa so kosi ɔkɛse so. Wɔankum obiara, na mmom wɔtwee wɔn sii kwan so de wɔn kɔe. 3 Bere a Dawid ne ne mmarima no bedui no, na wɔde ogya ahyew kurow no, na wɔn yerenom ne wɔn mma mmarima ne wɔn mma mmea nso, na wɔakyere wɔn kɔ. 4 Ɛnna Dawid ne mmarima a wɔka ne ho no maa wɔn nne so sui ara maa osũ no mee wɔn. 5 Dawid yerenom baanu no, Yesreelni Ahinoam ne Abigail a bere bi na ɔware Karmelni Nabal no nso, na wɔakyere wɔn kɔ.+ 6 Dawid ho yeraw no paa, efisɛ na mmarima no rekeka sɛ wobesiw no abo. Nea enti a ɛbaa saa ne sɛ, na wɔabɛfa wɔn mma mmarima ne wɔn mma mmea kɔ ama mmarima no nyinaa* bo afuw. Nanso Dawid de ne ho too Yehowa, ne Nyankopɔn so, na onyaa ahoɔden.+ 7 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ Ahimelek ba ɔsɔfo Abiatar+ sɛ: “Mesrɛ wo, fa efɔd* no bra ha.”+ Na Abiatar de efɔd no baa Dawid nkyɛn. 8 Dawid bisaa Yehowa sɛ:+ “Mintiw nnipabɔnefo dɔm yi anaa? Mekɔ a, mɛto wɔn?” Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Tiw wɔn, na sɛnea ɛte biara wobɛto wɔn, na nea wɔde kɔe nso, wo nsa bɛka.”+ 9 Ɛhɔ ara na Dawid sii kwan so, ɔne mmarima 600+ a wɔka ne ho no, na wɔkɔe ara koduu Besor Subon* no ho, na mmarima no bi kaa hɔ. 10 Dawid ne mmarima 400 toaa so tiw wɔn, na mmarima 200 a ɔbrɛ nti wɔantumi antwa Besor Subon no gyinae.+ 11 Wohuu Egyptni barima bi wɔ wuram hɔ, enti wɔde no kɔmaa Dawid. Wɔmaa no aduan dii, na wɔmaa no nsu nomee. 12 Wɔsan maa no borɔdɔma keeki ne bobe keeki abien ma odii, na ɔsan nyaa ahoɔden.* Ná onnidii, na na ɔnnom nsu nnansa, awia ne anadwo. 13 Ɛnna Dawid bisaa no sɛ: “Hena akoa ne wo, na ɛhe na wufi?” Na obuae sɛ: “Meyɛ ɔsomfo a mifi Egypt, na Amalekni bi akoa ne me, nanso nnansa ne nnɛ meyaree, enti na me wura agyaw me wɔ ha yi. 14 Yɛkɔɔ Keretifo+ anaafo fam* ne Yuda asaase ne Kaleb+ anaafo fam* nkurow so kɔtow hyɛɛ wɔn so, na yɛde ogya hyew Siklag.” 15 Ɛnna Dawid bisaa no sɛ: “Wubedi m’anim de me akɔ nnipabɔnefo dɔm no nkyɛn anaa?” Na ɔkae sɛ: “Sɛ woka me ntam Onyankopɔn din mu sɛ worenkum me, na worenyi me nhyɛ me wura nsa a, ɛnde medi w’anim akɔ nnipabɔnefo dɔm no nkyɛn.” 16 Ɛnna odii n’anim kɔɔ baabi a nkurɔfo no wɔ no, na wɔkɔtoe sɛ wɔsensam fam redidi nom na wɔregye wɔn ani esiane nneɛma pii a wɔako afa* wɔ Filistifo ne Yudafo asaase so no nti. 17 Ɛnna Dawid kunkum wɔn fi ahemanakye kosii anwummere; wɔn mu baako mpo anka,+ gye mmarima 400 na wɔtenatenaa yoma so guanee. 18 Nea Amalekfo no fae nyinaa, Dawid gyei;+ Dawid gyee ne yerenom baanu no nso. 19 Wɔn nsa kaa wɔn biribiara, efi akumaa so kosi ɔkɛse so, wɔn mma mmarima ne wɔn mma mmea ne asade* no ne nneɛma a wɔfae no nyinaa.+ Dawid gyee biribiara. 20 Enti Dawid faa nkurɔfo no nguan ne wɔn anantwi nyinaa, na ne mmarima no de wɔn dii wɔn ankasa nyɛmmoa no anim bae. Wɔkae sɛ: “Dawid asade ni.” 21 Ɛnna Dawid beduu mmarima 200 a ɔbrɛ nti wɔantumi ne Dawid ankɔ a wɔkaa Besor Subon ho+ no nkyɛn, na wofii adi sɛ wɔrebehyia Dawid ne nnipa a wɔka ne ho no. Bere a Dawid beduu wɔn nkyɛn no, obisaa wɔn sɛnea wɔn ho te. 22 Nanso mmarima a wɔne Dawid kɔe no, nnipabɔnefo ne ahuhufo a wɔwɔ wɔn mu no kae sɛ: “Wɔankɔ bi, enti asade a yɛde aba no, yɛremma wɔn bi. Wɔn yerenom ne wɔn mma nkutoo na yɛde wɔn bɛma wɔn akɔ.” 23 Ɛnna Dawid kae sɛ: “Me nuanom, monnyɛ saa, efisɛ Yehowa na wama yɛn nsa aka nneɛma yi, na ɔno na wabɔ yɛn ho ban de nnipabɔnefo dɔm a wɔbaa yɛn so no ahyɛ yɛn nsa.+ 24 Hena na ɔne mo bɛyɛ adwene wɔ asɛm yi ho? Wɔn a wɔkɔɔ ɔsa no bi ne wɔn a wɔtenaa nneɛma ho no nyinaa bɛkyɛ no pɛ.+ Obiara benya bi.”+ 25 Efi saa da no, ɔma ɛbɛyɛɛ ahyɛde ne mmara wɔ Israel de besi nnɛ. 26 Bere a Dawid beduu Siklag no, ɔde asade no bi kɔmaa Yuda mpanyimfo a wɔyɛ ne nnamfo no, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Akyɛde* a mede rebrɛ mo ni. Yenya fii Yehowa atamfo mu.” 27 Ɔde bi kɔmaa wɔn a wɔwɔ Betel,+ ne wɔn a wɔwɔ Ramot a ɛwɔ Negeb,* ne wɔn a wɔwɔ Yatir,+ 28 ne wɔn a wɔwɔ Aroer, ne wɔn a wɔwɔ Sifmot, ne wɔn a wɔwɔ Estemoa,+ 29 ne wɔn a wɔwɔ Rakal, ne wɔn a wɔwɔ Yerameelfo+ nkurow mu, ne wɔn a wɔwɔ Kenifo+ nkurow mu, 30 ne wɔn a wɔwɔ Horma,+ ne wɔn a wɔwɔ Borasan, ne wɔn a wɔwɔ Atak, 31 ne wɔn a wɔwɔ Hebron,+ ne wɔn a wɔwɔ mmeae a Dawid ne ne mmarima no dii hɔ akɔneaba no nyinaa.
^ Anaa “nkurɔfo no nyinaa kra.”
^ Nt., “ne honhom san baa ne mu.”
^ Anaa “asade a wonyae.”
^ Anaa “nneɛma a wonyae wɔ ɔko mu.”
^ Nt., “Nhyira.”
^ Anaa “anaafo fam.”